Bit By Bit - Mustaqbalka - 7.2.1 qasayso ee Readymades iyo Custommades
Midkoodna ah istaraatijiyad Readymade saafi ah mana istaraatijiyad Custommade saafi ah si buuxda u isticmaalaan awoodaha of da'da digital. In mustaqbalka aynu doonayno inaynu u abuuraan Beelaha.
In hordhaca ah, waxaan barbar qaab Readymade ah Marcel Duchamp la style Custommade ee Michelangelo. Tani waxay sidoo kale ka duwan qabsatay farqiga u dhexeeya saynisyahano xogta, kuwaas oo u muuqdaan in ay la shaqeeyaan Readymades, iyo saynisyahano bulshada, kuwaas oo u muuqdaan in ay la shaqeeyaan Custommades. In mustaqbalka, si kastaba ha ahaatee, waxaan filaynaa in aan arki doono Beelaha dheeraad ah maxaa yeelay kasta oo ka mid ah hababka saafi ah waa xaddidan. Cilmi kuwaas oo doonaya kaliya in ay isticmaalaan Readymades u socdaan inay halgan sababtoo ah waxaa jira Readymades badan ma qurux badan oo adduunka ah. Sidaas darteed, cilmi walbo style this saafi ah waxaa ka mid ah ka socda si ay allabari tayada adigoo isticmaalaya Readymades fool xun, ama ay u qaataan waqti badan raadinaya kaadiyo ugu fiican. Cilmi-kii oo kaliya rabto in aad isticmaasho Custommades, dhanka kale, waxaa ka socda si ay allabari ugu miisaanka. habab Hybrid, si kastaba ha ahaatee, isku dari kartaa miisaanka in la iman Readymades la taam ku dhagan dhexeeya su'aal iyo xogta ka timaada Custommades.
Waxaan arkay tusaalayaal ka mid ah Beelaha mid kasta oo ka mid ah afar cutub taaban karo. In Cutubka 2aad, waxaannu aragnay sida hargabka Isbeddellada Google isku daraa ah had iyo jeer-on nidaamka weyn xogta (weydiimo search) la nidaam itimaalka ku salaysan cabbirka dhaqanka (nidaamka ilaalada hargabka CDC) ee ay soo saaraan qiyaasaha dhakhso (Ginsberg et al. 2009) . In Cutubka 3aad, waxaannu aragnay sida Stephen Ansolabehere iyo Eitan Hersh (2012) weheliso xogta sahanka caadadiisu-dhigay xogta maamulka dowladda diyaar-dhigay, si ay u badan oo ku saabsan sifooyinka dadka kuwaas oo run ahaantii ay codeeyaan bartaan. In Cutubka 4aad, waxaannu aragnay sida tijaabo OPower in isku kaabayaasha cabbirka korontada diyaar-dhigay daaweynta caadadiisu-dhigay, si loo eego saamaynta caadooyinka bulshada on dhaqanka ee baaxadda weyn (Allcott 2015) . Ugu dambeyntii, cutubka 5, Waan idiin sheegay oo ku saabsan sida Kenneth Benoit iyo asxaabtii (2015) codsatay habka badnaa-sireed caadadiisu-dhigay si uu u qabtay diyaar-dhigay of manifestos abuuray by xisbiyada siyaasadda si loo abuuro xog in cilmi isticmaali kartaa inaad wax ka barato doorashada iyo dhaqdhaqaaqa of doodaha siyaasadda.
Kuwani afar tusaalooyin oo dhan ayaa muujinaya in istaraatijiyad awood mustaqbalka noqon doonaa si loo kobciyo ilaha xogta weyn, taas oo aan la ururiyey cilmi, macluumaad dheeraad ah oo iyaga ka dhigaa inay ku haboon cilmi (Groves 2011) . Haddii ay ka bilaabataa Custommade ama Readymade ah, style this hybrid heysta yabooha weyn oo loogu talagalay dhibaatooyin badan oo cilmi-baaris.